Famantarana: Analytics amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny fahitana azo ampiharina | Martech Zone
Ny angona lehibe dia tsy zava-baovao intsony eo amin'ny tontolon'ny asa. Ny ankamaroan'ny orinasa dia mihevitra ny tenany ho toy ny data-driven; Ireo mpitarika teknolojia dia nanangana fotodrafitrasa fanangonana angona, manadihady amin'ny alàlan'ny angon-drakitra ireo mpanadihady ary manandrana mianatra avy amin'ny angon-drakitra ireo mpivarotra sy mpitantana ny vokatra. Na eo aza ny fanangonana sy fanodinana angon-drakitra maro noho ny hatramin'izay, tsy mahita fahitana sarobidy momba ny vokatra sy ny mpanjifany ny orinasa satria tsy mampiasa fitaovana mety hanarahana ny mpampiasa manerana ny dian'ny mpanjifa iray manontolo izy ireo na raha tsy izany dia manao kopia data sy mampiditra lesoka ao amin'ny fanadihadiany.
Miankina amin'ny lohahevitra manokana, ny fangatahana voarafitra tokana ao amin'ny SQL dia mety maharitra adiny iray mahery ny fanaovana kaody sy ny retrieve. Ny fangatahana ad hoc dia sahirana manome famakafakana mpanjifa azo tanterahina satria ny valin'ny fanontanianao voalohany dia mety fanontaniana hafa. Fantatrao fa mihoatra ny 50% ny mpanjifa izay manindry ny bokotra CTA dia mahita ny làlan'ny pejy fisoratana anarana, saingy latsaky ny 30% amin'ireo mpanjifa ireo no mamorona mombamomba ny mpampiasa. Ary ahoana? Fotoana izao hanoratana fangatahana iray hafa amin'ny SQL hanangonana sombin-tantara hafa. Tsy voatery ho toy izao ny famakafakana.
Indikativa dia ny lohan'ny mpanjifa Analytics izay mamela ny ekipa vokatra sy angon-drakitra handroso mihoatra ny fetran'ny fitaovana BI nentim-paharazana handraisana fanapahan-kevitra amin'ny fahatakarana ny fihetsiky ny mpampiasa amin'ny lafiny rehetra. Ny Signative ihany no mifandray mivantana amin'ny trano fitahirizanao angona, tsy mila manao kopia, ary manome hery ireo mpampiasa orinasa hamaly ireo fanontaniana momba ny fanadihadiana an-tsokosoko momba ny mpanjifa nefa tsy miankina amin'ny ekipa angona na SQL. Ny mpitantana ny vokatra sy ny mpivarotra dia afaka mihazakazaka mametaka ireo fanontaniany ireo ao anatin'ny segondra izay mety handany ireo mpandinika data amin'ny kaody. Ny fomba fijery angona azo ampiharina dia dingana kely telo miala eo.
Dingana 1: farito ny tanjon'ny orinasa sy ny refy
Mba hananganana modely data mahomby dia tsy maintsy fararanao aloha ny tanjon'ny orinasa sy ny tranga ampiasainao. Ny Analytics Analytics ho an'ny mpanjifa dia natao hitarika ny fanapahan-kevitr'ireo ekipa vokatra sy marketing, ka miasà hihemotra amin'ny valiny antenainao ho tratrarina. Ny tanjona dia tokony hifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa lehibe. Ny fandrefesana dia afaka mandrefy ny fihetsiky ny mpampiasa rehetra, ny mpampiasa tsirairay ary ny zavatra rehetra eo anelanelany, ka mendrika ny manara-maso ireo tondro amin'ny ambaratonga maro. Avy eo, fantaro ny refy sy ny KPI afaka milaza aminao raha mahomby ianao. Ohatra vitsivitsy amin'izany dia mety:
Ampitomboy ny fiovan'ny mpampiasa vaovao
Ahenao ny churnan'ny mpamandrika
Fantaro ireo fantsom-barotra mahomby indrindra vitanao
Mitadiava teboka misy ny fikororohana amin'ny onjam-piainanao
Raha vantany vao tafapetraka amin'ny tanjona ianao dia mametraha fanontaniana iray antenainao hovaliana miaraka amin'ny angon-drakitra mpampiasa anao. Ohatra, milaza ianao fa mikendry ny hampitombo ny fananganana endri-javatra vokatra vaovao. Ireto misy ohatra vitsivitsy amin'ny fanontaniana tianao hovaliana rehefa mamakafaka ny lalan'ny fifandraisan'ny mpampiasa ianao:
Moa ve ny mpanjifa premium nanaiky ny vokatra haingana kokoa noho ny mpampiasa maimaim-poana?
Firy ny pikitika na ny efijery takin'ny mpampiasa raha te hahatratra ilay vokatra vaovao izy?
Misy fiantraikany tsara amin'ny fitazonana ny mpampiasa ao anatin'ny fotoana iray ve ny fananganana endri-javatra vaovao? Amin'ny fotoam-pivoriana marobe?
Miaramila amin'ireto fangatahana ireto sy ny angon-drakitra hamaliana azy ireo, azonao atao ny manadihady hetsiky ny mpampiasa an'arivony manerana ny dian'ny mpanjifa iray manontolo. Miomàna hitsapana ny fehin-kevitrao amin'ny alàlan'ny sary an-tsaina ny fantsom-pahalalana.
Dingana 2: Araho ny dia ataon'ny mpanjifanao amin'ny dian'ny mpanjifa marobe
Endri-javatra iray manondro fototra ny Fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa marobe. Ny dian'ny mpanjifa dia aseho amin'ny alàlan'ny fantsona marobe, mampiseho ny fizotran'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanapahan-kevitra miavaka ao anatin'ny tranokalanao na ny fampiharana findainao. Ny fakana sary an-tsaina ny dia dia manampy ny ekipan'ny vokatra sy ny marketing hamantatra ny fihetsika manokana sy ny toerana itondrana ny fahazoana ny mpanjifa, ny fitazonana azy na ny churn.
Ny fizarana ny fantsom-pivoarana dia mamela ny ekipanao hahita ny teboka marim-pototra izay ialan'ny mpampiasa ny fihetsika tiany na hialany tanteraka amin'ilay vokatra. Ny Multipath Customer Journey dia mamela ny orinasa hamantatra ireo loharano manintona ny mpanjifa manintona azy ireo, manapaka ny ampahany amin'ny fantsona hampitahana ny dian'ny mpanjifa mitovy amin'izany. Ny ekipa dia afaka mampifanaraka ny sori-dalan'ny vokatra hamaha olana amin'ny traikefan'ny mpampiasa ary mikendry ny hamerina ny valin'ny mpanjifa idealy.
Dingana 3: Mandroroa lalindalina miaraka amin'ny mpiara-miasa sy ny mombamomba
Raha vantany vao nandinika ny fomba fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny vokatrao ianao dia afaka mandray andraikitra ny ekipa mpivarotra amin'ny fampielezan-kevitra mikendry ireo mpanjifa ireo fa mety hanana sanda ambony. Ny pratika dia mamela anao hampisaraka ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny famantarana rehetra azo eritreretina amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny vondrona fitondran-tena. Mety hahita ianao:
Ireo mpampiasa mahazo ny mailaka voalohany amin'ny marketing amin'ny alatsinainy maraina dia azo inoana kokoa ny hisoratra anarana noho ireo izay mahazo ny fifandraisany voalohany amin'ny herinandro.
Ny mpitsara maimaimpoana dia mirongatra raha tsy hoe ampahatsiahivina fa hifarana ny ampitson'io ny fitsarana azy ireo.
Raha te hahazo granular ny ekipanao marketing, dia manolotra mombamomba ny mpampiasa i Signative, mamela azy ireo hampiasa personas manokana an'ny mpanjifa tsara indrindra. Ao anatin'ny trano fitehirizan-drakitrao dia misy log isaky ny hetsika ataon'ny mpampiasa. Ny mombamomba ny mpampiasa ao amin'ny Signative dia mitondra anao mandritra ny dian'ny mpanjifa iray manontolo, manomboka amin'ny tsindry voalohany ka hatramin'ny farany indrindra. Ny fizarana manokana sy ny mpiara-miasa dia mampiakatra ny bara ho an'ny varotra manokana.
Misy volamena miafina ao anatin'ny trano fitahirizanao angona, ary manampy anao hitrandraka izany ny Signative. Tsy mila fahalalana kaody na fankasitrahana ireo fotodrafitrasa momba ny angona ianao hahitanao ny fomba fijery fanadihadiana ilaina. Ny hany ilainao dia fampisehoana fampisehoana vokatra an'ny Indikativa sy fidirana amin'ny angona mpampiasa ny orinasanao.
Andramo ny Demo mampiseho
Tags: biangona angonachurncohorts manokanafahazoana mpanjifaanalytics an'ny mpanjifampanjifa churnMpanjanantanyfitazonana ny mpanjifafizarana ho an'ny mpanjifamatoantenydian'ny mpanjifa multipathfantsona multipathmombamomba
WordPress: Mamorona Sidebars ho azy isaky ny sokajy